FEPETRA ANKAPOBENY MOMBA NY VAROTRA | ROVA CAVIAR MADAGASCAR
Azo jifaina eto Madagasikara sy Frantsa irery ihany
FEPETRA ANKAPOBENY MOMBA NY VAROTRA
I – Fampahafantarana ny orinasa
rova-caviar-madagascar.com no tranokala fanaovana ny varotra an-tseraseran’ny orinasa ADC SELECTION SAS izay mampiasa renivola 50 000 €
Adiresy : 31 rue Emile Zola 95870 BEZONS
Laharan-tariby : 01 82 06 63 63
Laharan’ny TVA : FR798 52292 721
Raha misy fanamarihana momba ny tranokala na ny votoatiny, dia aza misalasala manoratra amin’ny ADC SELECTION SAS amin’ny adiresy mailaka : e-boutique@rova-caviar.com.
Azonao atao koa ny miantso ny laharan-tariby : 01 82 06 63 63.
II – Antsipiriany momba ny fifanaraham-barotra mialoha
Manaiky ny mpanjifa fa efa nahafantatra, namaky sy nahazo tsara, ny antsipirian’ny fepetra ankapobeny momba ny varotra izay lazaina eto, sy ny tsara ho fantatra rehetra voalaza ao amin’ny andininy faha-111-1 ao anatin’ny Lalàna momba ny Fanjifana, mialoha ny namandrihany entana sy nandraiketana ny fifanaraham-barotra.
III – Sehatra iantefany – Antony
Ity fepetra ankapobeny momba ny varotra ity dia mihatra ara-dalàna amin’ny varotra rehetra ifanaovan’ny orinasa ADC SELECTION SAS – izay mampiasa renivola 50 000 €, manana ny adiresy ao amin’ny 31 rue Emile Zola 95870 BEZONS, mitondra ny laharana RCS 852 292 721 sy fantatra amin’ny TVA ao anatin’ny Fivondronambe eropeanina laharana FR798 522 92 721 – amin’ny mpanjifa rehetra na fikambanana mizaka zo aman’andraikitra, manjifa ho azy ireo manokana, ankoatra izay fanjifana tafiditra ao anatin’ny asa sahaniny, vokatra/entana amidy ato anatin’ny tranokalam-barotry ny ADC SELECTION SAS; manaiky mameno ireo antsipiriany rehetra tsy maintsy fenoina amin’ny fotoana handraketana ny mombamomba azy; ary manana adiresy anaterana ny entana ao anatin’ny iray amin’ireo faritra hiasan’ny ADC SELECTION SAS.
Midika fanekena manontolo sy tsy misy fepetra ireo fepetra ankapobeny momba ny varotra sy ireo fepetra manokana momba ny entana nofandrihana ny fanamafisan’ny mpanjifa ny famandrihana entana ato anatin’ny tranokala. Tsara marihina fa mialoha izany dia misy ny firafi-pitaovana hahafahan’ny mpanjifa manitsy na manova ny safidy nataony, ary mamaky tsara sy mahafantatra ity fepetra ankapobeny momba ny varotra ity.
Ny famandrihana entana rehetra dia midika fankatoavana tsy misy fepetra ity fepetra ankapobeny momba ny varotra ity, izay ambony noho ny fepetra hafa rehetra, ankoatra izay fepetra mety ho nankatoavin’ny ADC SELECTION SAS manokana.
Manan-jo ny orinasa hanova, amin’ny fotoana rehetra, ny fepetra ankapobeny momba ny varotra. Raha izay no mitranga dia izay fepetra mihatra amin’ny daty hamandrihan’ny mpanjifa ny entana no ampiharina.
IV – Mombamomba ny vokatra/entana
Ny vokatra/entana rehetra aseho ato anatin’ny tranokala dia samy hahitana fampahafantarana fohy ny mombamomba azy avokoa, isan’izany ny anarany, ny habetsahany/fatrany ary ny vidiny.
Sary fanehoana ihany ireo sary maneho ny vokatra/entana, ary mijanona ho fampahafantarana ny endriky ny vokatra/entana amin’ny ankapobeny fotsiny.
Asaina isika hamaky tsara ny mombamomba ny vokatra mialoha ny hanamafisana ny famandrihana entana.
V – Faharetan’ny tolotra
Arakaraka ny fisian’ny entana/vokatra ny faharetan’ny tolotra.
Raha sendra misy tsy fisian’ny vokatra/entana aorian’ny famandrihana ny entana, dia ampandrenesina amin’ny alalan’ny mailaka na antso an-tariby ny mpanjifa ao anatin’ny 24 ora (andro fiasàna) aorian’ny namandrihany ny entana.
Raha izay no mitranga dia azon’ny mpanjifa atao ny misafidy :
–	Na hanemotra ny fotoana hanaterana ny entana/vokatra, mandra-pisiana na mandra-pahatongavan’ny entana/vokatra indray, raha toa ka mety,
–	na hanakalo ny entana/vokatra tsy misy amin’ny entana/vokatra hafa, mitovy kalitao sy mitovy vidy aminy,
–	na hanafoana ny famandrihana entana/vokatra ka haverina ny vola efa naloa.
VI – Famandrihana entana
Amin’ny fotoana hanaovana ny famandrihana entana voalohany, dia ny tenimiafina safidian’ny mpanjifa sy ny adiresy mailaka omeny miaraka aminy (ity farany no ampiasaina ho anaram-pamantarana) no raisina ho porofon’ny mombamomba ny mpanjifa sy porofon’ny fanomezan-toky amin’ny famandrihana entana rehetra atao amin’ny anarany. Araka ny didim-panjakana 2001-272 tamin’ny 30 marsa 2001 dia mitovy lanja amin’ny sonia elektrônika ireo tenimiafina sy adiresy mailaka ireo. Tomponandraikitra feno amin’ny anaram-pamantarana sy ny tenimiafina ampiasainy ny mpanjifa, ary tompon’antoka feno amin’izay mety ho zava-miseho raha misy olon-kafa mahafantatra ka mampiasa izany.
Ny mpanjifa rehetra manam-pikasana hividy entana/vokatra dia tsy maintsy :
– Mameno amin’ny antsipiriany ny faritra natokana hasiana ny mombamomba azy, izay hametrahany ny adiresy/laharan-tariby/mailaka hahafahana mifandray aminy,
– manao ny famandrihana entana an-tserasera amin’ny alalan’ny fifantenana/fisafidianana ny entana/vokatra sy ny habetsahany/fatrany araka izay itiavany azy,
– manamafy ny famandrihana entana rehefa avy manamarina tsara ny fintin’ireo entana rehetra nafarana ao anatin’ny harony (ho fankatoavana ny famandrihana entana dia tsy maintsy manaiky ny fepetra ankapobeny momba ny varotra ny mpanjifa, amin’ny alalan’ny fanindriana ny bokotra eo amin’ny faritra voatondro),
– mandoa ny vindin’entana araka ny fepetra efa voafaritra hanaovana izany,
– manamafy ny famandrihana ny entana sy ny fandoavana ny vidiny/pitsopitsony rehetra momba ny fanaterana azy.
Tomponandraikitra amin’ny tahirin-kevitra omeny momba azy ny mpanjifa. Raha misy fahadisoana nataon’ny mpanjifa amin’ny laharan-tariby/adiresy mailaka na ny toerana hanaterana ny entana – isan’izany ny anarany, ny fanampin’anarany, ny adiresiny, ny laharan-tariby, ny adiresy mailaka, ny laharan’ny varavarana – ka miteraka fahaverezan’ny entana nafarana, dia adidin’ny mpanjifa hatrany ny mandoa ny vidin’entana very, ary tsy hisy ny fameranam-bola. Porofon’ny fifanaraham-barotra, ary raisina ho sonia sy fanekena ny fifanaraham-barotra natao ny fanamafisana ny famandrihana entana voarakitra ato anatin’ny tranokala.
Handefa mailaka ny mpivarotra ho fanamafisana ny fandraketana ny famandrihana entana.
VII – Fandoavam-bola
VIII – Faritra iasana – Fe-potoana sy saran’ny fanaterana entana
IX – Fanatanterahana ny fanafarana entana
X – Fe-potoana hamerenana entana
Omena fe-potoana 14 andro fiasàna, aorian’ny daty nanaterana ny entana nafarana/nofandrihana (ho an’ny kojakoja Rova Caviar), ny mpanjifa sy ny olon-tsotra (tsy orinasa) hiovàna hevitra.
Na izany aza, tsy voakasik’ity fahazoana miova hevitra ity ny fifanaraham-barotra mikasika entana mora simba izay hita ato anatin’ny tranokala (izany hoe ny Caviar).
XI – Antoka
Ny entana rehetra amidin’ny mpivarotra dia misitraka feno ny fepetra momba ny antoka, araka izay voafaritry ny lalàna ao amin’ny andininy 1641, sy araka izay voalaza ao amin’ny Fehezandalàna mifehy ny sivily sy ny fiantohana ny fenitry ny entana ao amin’ny andininy L.211-1 ka hatramin’ny L.212-1 ao anatin’ny Lalàna momba ny Fanjifana.
Raha misy tsy fanaraham-penitry ny entana efa lafo dia azo atao ny mamerina izany any amin’ny mpivarotra. Handray azy ity farany ka hanakalo na hamerina ny vola nividianana azy.
Alefa an-taratasy amin’ny alalan’ny paositra amin’ny adiresy ADC SELECTION SAS – 31 rue Emile Zola 95870 BEZONS avokoa ny fanamarihana, fangatahana fanakalozana entana na famerenam-bola.
Mampahatsiahy ny ADC SELECTION SAS fa ao anatin’ny roa taona aorian’ny nandraisana ny entana naterina no fe-potoana hahafahana mampiakatra ny raharaha araka ny voafaritry ny lalàna (andininy L.211-12 ao amin’ny Lalàna momba ny Fanjifana), ary ao anatin’ny roa taona aorian’ny nandraisana ny entana nafarana koa no fe-potoana hahafahana mampiakatra ny raharaha raha misy fahasimbana tsy hita mialoha teo amin’ny entana.
XII – Andraikitra
Tsy azo tanana ho tompon’antoka na ho tsy nahatanteraka ny teny nomeny ny mpivarotra raha misy fahatarana na tsy fanatanterahana ny fanaterana ny entana noho ny antony avy amin’ny mpanjifa manokana, na noho ny toe-javatra tsy nampoizina sy tsy azo anoharana manjo olon-kafa ao anatin’ny fifanaraham-barotra, na noho ny antony lehibe tsy azo anoharana sy tsy azo idovirana araka izay voafaritra ao amin’ny lalàna ara-pitsarana frantsay. Lazaina ho antony lehibe tsy azo anoharana sy tsy azo idovirana, ka maha afaka ny mpivarotra amin’ny adidy aman’andraikiny hanatitra ny entana, ny ady, ny fikomiana/rotaka, ny haitrano, ny fihetsiketsehana, ny loza sy ny tsy fahafahana manana ny entana.
Tsy azo tanana ho tompon’antoka ny mpivarotra raha misy fahasimbana vokatry ny fampiasana ny tambajotra aterineto, isan’izany ny fahaverezan’ny raki-kevitra, fanitsakitsahana ny tsiambaratelo, fidiran’ny virus, fahatapahan’ny tambajotra aterineto, na olana hafa tsy nahy sy tsy miankina aminy.
XIII – Ny zo momba ny fananana ara-tsaina
Ny singa rehetra ao anatin’ny tranokala ADC SELECTION SAS dia fananan’ny ADC SELECTION SAS ary mijanona manontolo ho fananana ara-tsainan’ny ADC SELECTION SAS irery ihany.
Tsy misy olona mahazo maka tahaka, mitrandraka, manaparitaka na mampiasa ireo singa ao anatin’ny tranokala, toy ny rindram-baiko, ny raki-tsary sy ny raki-peo, na inona na inona antony ary na amin’ny ampahany ihany aza.
Voarara ny fanovonana rohy tsotra na rohy fanampiny raha tsy misy fahazoan-dalana an-tsoratra mialoha avy amin’ny ADC SELECTION SAS.
XIV – Tahirin-kevitra momba ny tena manokana
Manana zo hanangona ireo tahirin-kevitra manokana momba ny mpanjifa ny ADC SELECTION SAS, isan’izany ny fampiasana cookies, mba handraisana an-tanana sy hikarakarana ny fanafarana/famandrihana entana.
Araka ny lalàna tamin’ny 6 janoary 1978 dia manan-jo hijery, hanova na hamafa ireo tahirin-kevitra momba azy ny mpampiasa ny tranokala. Ho fanatanterahana izany dia alefa any amin’i Ramatoa Amandine RAKIC, any amin’ny adiresy ADC SELECTION SAS 31 rue Emile Zola 95870 BEZONS, ny fangatahana hijery, hanova na hamafa/hanafoana ny tahirin-kevitra.
Azonao jerena ato ny pôlitika momba ny tsiambaratelo sy ny tahirin-kevitra momba ny tena manokana.
XV – Fitehirizana porofo
Hotehirizin’ny ADC SELECTION SAS ao anatina fitaovana azo antoka sy maharitra ireo taratasy fanamarinana fanafarana/fividianana entana (bon de commande) sy ny faktiora, mba hatao sy hampiasaina ho dika mitovy araka izay voafaritry ny andininy 1348 ao amin’ny Fehezandalàna mifehy ny sivily.
Ireo firaketana/rejisitra navadika anaty solosaina tehirizin’ny ADC SELECTION SAS, izay mpisehatra matihanina amin’ny caviar, dia horaisina sy ho eken’ny roa tonta fa porofon’ny fifampiresahana/fifanakalozana, fanafarana/famandrihana entana, fandoavam-bola ary raharaham-barotra nisy teo amin’ny roa tonta.
XVI – Fandravonana fifanolanana
Voafehin’ny lalàna frantsay ny fepetra ankapobeny momba ny varotra an-tserasera lazaina eto.
Raha misy fifanolanana dia ireo Fitsarana mahefa, araka izay voafaritry ny lalàna manan-kery, no handray an-tanana sy hitsara ny raharaha, ary raha misy fifanolanana amina orinasa sy/na mpivarotra dia ny Fitsarana mahefa ao Paris no hitsara ny raharaha, na firy na firy isan’ny voapanga ary na misy fanilihana ny adidy aman’andraikitra amin’olon-kafa aza.
XVII – Fisoratana anarana amin’ny taratasim-baovao
Rehefa misoratra anarana amin’ny taratasim-baovaonay ianao dia angononay ny mombamomba anao (anarana feno, mailaka) ary koa ny adiresy IP anao.
Azonao atao ny tsy misoratra anarana intsony amin’ny fotoana rehetra amin’ny fipihana ny rohy amin’ny mailaka rehetra.
XVIII – Fepetra momba ny fanelanelanana
Raha misy fanoherana dia afaka mangataka fanelanelanana ivelan’ny rafitry ny fitsarana ny mpanjifa, isan’izany ny fanatonana ny Kaomisiona momba ny fanelanelanana amin’ny fanjifana, na ireo ambaratonga isan-tsokajiny manao fanelanelanana eny amin’ny sehatra misy azy avy, na izay sehatra hafa rehetra hahafahana mamaha ny tsy fifanarahana (manao raharaham-pihavanana ohatra).